Daawo: Waa kuwee 10 ka Caado ee ugu yaabka badan ugu xun xilligaan la joogo caalamka. | shumis.net
Home » Layaab » Daawo: Waa kuwee 10 ka Caado ee ugu yaabka badan ugu xun xilligaan la joogo caalamka.
Daawo: Waa kuwee 10 ka Caado ee ugu yaabka badan ugu xun xilligaan la joogo caalamka.
Dadka qaar waxa aysan ogoleyn iney qaataan ama la jaan qaadaan nolosha casriga noqoneysa marba marka kasii dambeysa xilligan aynu noolnahay, Dadkan oo wata wax laga soo min guuriyey awoowayaashooda. Hadaba waxaan dooneynaa inaan maqaalkan idin kugu soo koobka 10 Dhacdo oo la yaab leh kuwaas oo caado horey u jiri jirtay misana aan laga sal guurin weli.
Qabiilka lagu magacaabo Dani ee ku nool dalka Guine, waxa ay Jaceylka ay u qabaan qofka kale ugu cabiraan iney iska jaraan faraha una hadiyadeeyaan. Sidoo kale dadkan ku nool wadanka Guine ayaa sidoo kale sameeye dhacdo kale oo la yaab leh, Naagta ama ninka hadii uu dhinto midkood midka kale waxa uu meyd ka shaqsiga dhintay raaciyaa farahiisa isaga oo iska jaraya inta hore ee faraha weyna la duugaan, arintan ayey sidoo kale ku muujiaan jaceylka ay u qabaan qofka dhintay. Dhacdadan qabiilka Daani waxaa la wadaago qabiil kale oo xiriir dhanka dhaqanka ah kala dhaxeeyo waxaana lagu magacaabaa qabiilkaas Ba Janiiz.
Madoobeynta la madoobeeyo marwada caruusada ah waa dhaqan soo jireen u ah dalka Scotland, halka ninka caruuska lagu tuuro walxo urayo sida Ukun aan la bisleyn, Basal madow, iyo Doorada (digaagad) baalkeeda, si lawada lamaane ee is guursanayo ay u noqdaan kuwa ka duwan dadka kale, waxaana sidoo kale xusid mudan in Caruuska iyo caruusada lagu soo wareejinayo magaalada ay dagan yihiin.
Ugu dambeyn waxaa xusid mudan in dhaqankan soo jireenka u ah dalka Scotland laga sameeyey Film sanadkii 2007 da, taas ayaana caddeyn u ah in weli meelaha qaar ay ka jiraan dhaqankan.
Dalka Germany waxaa iyadana ka jirta dhaqan kale ama caado kale oo la yaab leh, caadadan ayaa ah in dadka martida ah ay burburin iyo jejebin ula dhaqaaqayaan alaabta ay leeyihiin dadka caruuska ah kahor habeenka aqalgalka waxa ayna alaabka ku jejebinayaan oo ay soo dhoobayaan banaanka hore ee guriga arooska uu ka dhacayo, waxaa lagu micneeyey dhaqankan ama caadadaan mid nasiib usoo jiideyso lamaanaha is guursanayo, xaflad ayaana socon saacado badan iyada oo ay dadka qaraabada u ah labada lamaane ay cuno iyo cabitaan u sameynayaan dadka aan shaqada ku laheyn alaab burburinta int ay socoto howshan.
Dalka horumaray ee Ingiriiska ayey iyadana ka jirtaa caado xun oo la yaab leh, caadadan ayaa ah in shaqsiga Banii’aadamka uu isku ekeysiinayo Boolboolada nuuca loo yaqaan cagomacaf (The Duck), ujeedada dadkan ay u sameeyaan sidan ayaa ah iney ku helayaan abaal marin hadii ay wejigooda badalaan oo ay sidan la yaabka leh ugu ekeysiiyaan Boola boolada Cagomacaf ta. Abaalmarintan lagu bixiyo ayaa soo bilaabatay muddo laga joogo 1266 sano, sidoo kale waxaa jira dad ku caan baxay isku ekeysiinta Bool booladan waxaana kamid ah ragaas caanka ah Tommy Matyson iyo Jordan Matyson iyo weliba Ron Lonny.
Koox lagu magacaabo Tiigoong oo kamid ah dadka daga Waqooyiga Borneo ayaa leh caado la yaab leh kahor inta aan dhicin arooska, caadadan la yaabka leh ayaa ah in ninka iyo naagta is guursanayo ay mamnuuc ka tahay iney galaan suuli muddo sedex maalin ah, taas macnaheeda ayaa ah ineysan lamaanaha is guursanayo aysan kaadi iyo xaajo gudahaba u aaadeyn suuli iyaga oo isku celinayo sedexdaas maalin. Dadkan ayaa u mooda in caadadaan ay kamileysa arooskooda, Arooska iyo aroosada ayaa la siinayaa cunno yar si loogaaga ilaaliyo iney qabato kaadi ama saxaro muddadaas sedexda maalin ah.
Ugu dambeyn waxaa xusid mudan in dad badan oo qoyska labada shaqsi kamid ah ay u sameynayaa ninka iyo naagta ilaalo gaar si ay u dhawraan uguna celiyaan iney isticmaalaan suuli.
Cago qorista ama cago yarreynta waa dhaqan ka jiri jiray Chine 1000 sannadood kahor balse dalkaas Chine ayaanan weli iska deyn howshaas iyada oo ay weli dadka qaar ee ku nool halkaas ay jaraan cagahooda Dumarka ayaana ah dadka ugu badan ee jara qeybta hoose ee lugta iyaga oo ka dhigo cagtooda ineysan galeyn kab aan dhirir ahaan ka badneyn 3 Inch.
Arrintan ayey dumar Chinese ka u arkaan iney tahay qurux wallow ay xanuun dareemayaan marka ay soconayaan haddana dhaqaatiirta qaar ayaa ka deyrinayo iyaga oo sheegay in xanuunka ka yimaado jariinkaas aan dawo loo heleyn.
Adoonsi waa shey horey u jiray xilliyadii hore, balse adoonsiga hadda laga isticmaalo meelaha qaar ayaa ah mid ka duwan, Ninka waxa uu guursan karaa tirada uu doono ee Adoonta, Sida caadada ah naagta caruurta ay dhasho waxa ay xaq u yeeshaan iney dhaxlaan aabahooda.
Arrintan ka jirta qeybo kamid dalalka Ethiopia, Chad, ayaa ah mid ka duwan midii aan horey u naqaanay, Caruurta ay dhasho naagta Adoomeyda ah waxa ay dhaxalka ay qaadaan 3 jibaar ka hooseynayaan caruurta ay dhashay haweeneyda aan adoomeyda aheyn.
Dilka Banii’aadamka loo geysta iyada oo laga dhigayo waxa loo yaqaan “Udxiya” waa wax horey usoo jiri jiray iyada oo ay dadka u isticmaali jireen qaab diimeed ahaan, halka dadka qaar ay qali jireen xoolaha, Dhaqankan ayaa u laabanayo Greece “Giriiiga” oo lagu tilmaamo iney yihiin dadkii ugu horeeyey ee sameeyey arintan, waxa ayna u isticmaali jireen baqdin ay ka qabaan waxyaabaha quraafaadka loo sheego iyaga oo lagu cabsi gelin jiray iney ku dhaceyso mucjiso hadii aysan gowracin ama dilin ruux. Dhanka kale waxaa xusid mudan in Casrigii Roomaanka iyada ay dowladii ka dhisneyd dalka Talyaaniga ay ku fulin jirtay arintan oo kale dadka ka gala Dambiyada, Roomaanka ayaase gowraci jiray mararka qaar dad aan waxba galabsan iyaga oo ku ilaashanayo maslaxooda gaar ah, mararka qaar boqorka xukunta hayo ayaa fulin jiray si uu u badbaadsado kursigiisa.
Dalka Japan oo kamid ah dalalka taariikhda ku leh caalamka aynu ku noolnahay ayaa ah dal kamid ah dalalka lagu arko waxyaabaha Cajiibka ah, Dalka lagu naaneeso Samuraay “Samurai” Seppuku oo ah caadada ka jirta ayaa ah in shaqsigii dareema dambi inuu qudha iska jarra oo uu isaga gacantiisa isku dila. Shaqsigaan ayaa loo soo xerayaa dhar cad cad, waxaana la keenayaa meel ay dadka isugu imaadaan, Waxaase fulinayo dilkiisa qof aan sidaas ugu fogeyn shaqsiga dambiga gala, balse ninkan dambiga gala ma uu sameyn doono wax iska caabin inta ay ka baxeyso nafta iyada oo aan wax xarig ah lagu xereyn shaqsigaas.
Title: Daawo: Waa kuwee 10 ka Caado ee ugu yaabka badan ugu xun xilligaan la joogo caalamka.